Xulashada ugu fiican ee sheekooyinka taariikhiga ah
Dib u eegista sheekooyinka taariikhiga ah
Waalidiinta Fog, waxaa qoray Marina Jarre
Waxaa jirtay waqti ay Yurub ahayd adduun aan raaxo lahayn in lagu dhasho, halkaas oo carruurtu ku soo galeen dunida oo ay ka muuqato nostalgia, xididdada, kala fogaanshaha iyo xitaa cabsida waalidkood. Maanta arrintu waxay u wareegtay qaybaha kale ee meeraha. Su'aashu waxay tahay in aragtidaas la qaato ...
Hildegarda, oo ay qortay Anne Lise Marstrand-Jørgensen
Shakhsiyadda Hildegarda ayaa na soo bandhigaysa meel khaldan oo halyeey ah. Halkaas uun baa khuraafaadka quduusiinta iyo saaxiriintu ku noolaan karaan isla mudnaanta maalmaheenna. Sababtoo ah maanta mucjiso lagu soo kabsado nin indha la 'ayaa leh khiyaano la mid ah sixir awood u leh ...
Sharciga Wolves, waxaa qoray Stefano de Bellis
Waxay ku xirnaan doontaa Luperca, oo ah nooca yeeyga ee nuugtay Romulus iyo Remus. Ujeedadu waxay tahay in halyeeyga aan laga leexan karin uu si fiican ugu habboon yahay qayb ka mid ah aragtida Boqortooyada Roomaanka oo ah dhaqan aan la mahdi karin laakiin habaysan, oo leh dareen badbaado iyo xitaa waaritaan. Sababtoo ah ma jirin ilbaxnimo kale ...
3 -da buug ee ugu fiican Luis Zueco
Waxaan Luis Zueco kula kulmay torrid iyo Zaragoza 23 Abriil dhawr sano ka hor. Akhristayaasha dawakhsan waxay sii mareen Paseo Independencia oo ka mid ah buugaag aad u tiro badan oo lagu soo bandhigay maalintaas Saint George ee ifaysa. Qaarkood waxay codsadeen saxeex qalafsan halka kuwa kalena ay dhinac kale ka eegeen haddii ay dhacdo ...
Maalin ayaan imaan doonaa Sagres, oo ay leedahay Nélida Piñón
Sida had iyo jeer, suugaanta badbaadinta Taariikhda. Waxba ma noqon doonaan wax laga barto taariikhdeena haddaan la hubin suugaanta. Sababtoo ah khiyaaliga taariikheed wuxuu dhaafsiisan yahay taariikhaha gundhig u ah dhacdooyinka iyo taariikhooda rumaystayaasha cibaadada leh ee saraakiisha. Nélida Piñón ayaa na siisa ...
Violet, by Isabel Allende
Gacmaha qoraaga sida Isabel Allende, taariikhdu waxay ku guulaysataa shaqadan soo dhawaynta wakhti hore oo ay ka buuxan wax baris. Waxbariddaas ha ahaato mid qiimo leh iyo haddii kale, sababtoo ah ku celcelinta khaladaadka waxaan nahay kuwo karti leh. Laakin haye... Wax la mid ah ayaa ku dhaca sheeko-sheeko kasta oo sheeko taariikheed ah. Sababtoo ah akhristayaasha badan ...
Madonna oo ku jirta Coat Fur oo uu qoray Sabahattin Ali
Turkiga waa daahfurka weyn ee taxanaha baastada ee waqtiyadii dhowaa. Melodramas -ka Koonfurta Ameerika waxay u banneeyeen sheekooyinka maalinlaha ah ee Turkiga ugu Yurub. Ma aha in sheekadani ay socoto, laakiin waxaa jira wax dhiirrigelin leh oo ku saabsan qorshaha. Waqti kale oo kala duwan laakiin jahwareer la mid ah ...
Baraarugga Bidcada, waxaa qoray Robert Harris
Had iyo jeer waxaa jira waqti marka qof kasta oo sheekooyinka sheekooyinka taariikhi ah uu ku dhammaado wax ka qabashada xiisaha hadda jira iyada oo ay sii dheer tahay shakiga ay sabab u tahay goob mugdi ah oo waqtiyo fog ah. Robert Harris ma ahayn mid ka reeban. Bulsho ay iimaanka iyo caqiidadu ka cayriyeen ...
Bogga1 Bogga2 ... Bogga19 Xiga →
Mareegtan waxay isticmaashaa cookies si ay u horumariso oo u shakhsiyayso khibradaada. Macluumaad dheeraad ah gudaha siyaasaddayada buskudka.